Posted by ကလိုစေးထူး at 11:58 PM
အာရှသား ငတုံးပါ ဟဲဟဲ ကျနော်တော့မေ့ပြီး ထိုင်းမှာကလည်း အင်္ဂလိပ်စကားအရမ်းကိုထည့်ပြောတာဆိုတော့ အန်ဒါစတန်း တစ်ခုပဲကြားဖူးတယ် ။ နဂိုတည်းက တော်ရတဲ့အထဲ ထိုင်းတွေကြားဆိုတော့ ဟိုဘက်ကမ်းပါကူးသွားတယ် တော် ချက် တော်ချက် ဒါနဲ့ အစ်ကို it နဲ့ is ဘာကွာလဲဗျ တူတူပဲလား ???
Feb 11, 2009, 12:35:00 AM
Feb 11, 2009, 1:34:00 AM
ဟုတ်တယ် မနော်ပြောသလိုပဲ ။ အဖြေလေးလဲ ရေးပေးအုန်း ။
Feb 11, 2009, 3:37:00 AM
ကောင်မလေးတွေ အဖြေ၀ိုင်းတောင်းနေကြပါလား ...
သူတို့ကျတော့ အဖြေမပေးဘဲနဲ့ .. ဟတ်ဟတ်
ဖြေလိုက်လို့ မှားတွားရင် ရှက်လို့ထင်တယ်။း)
Feb 11, 2009, 3:48:00 AM
အခုဖြေတဲ့လူက sin dan lar ဆိုတာ လျှို့ဝှက်ထားပေးပါ။
Feb 11, 2009, 4:25:00 AM
c,a, d
ဒီမှာလဲ တလွဲ ဖြေမိ လုပ်မိပြန်ပြီ ထင်တယ်။ လစ်မှ..:)
Feb 11, 2009, 7:40:00 AM
ရေးတတ်ချင်ရင် အင်္ဂလိပ်စာပိုဒ်တွေ များများကူးရေးပေးရတယ်တဲ့။
ပြောတတ်ချင်ရင် အင်္ဂလိပ်စကားများများနားထောင်ပေးရတယ်တဲ့ (နားမလည်တာ၊ လည်တာ နောက်ထားပါတဲ့။ သဒ္ဒါတွေဘာတွေ မမှတ်မိရင်လဲ နေပါစေတဲ့။ အဆက်မပြတ်သာ နားထောင်ပေးပါတဲ့။ သူ့ဘာသာသူ တဖြည်းဖြည်းပြောထွက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့)
ကျွန်တော်ကတော့ c, b, c ဗျာ။
Feb 11, 2009, 8:21:00 AM
ကျုပ်ကတော့ c, b,dပါခင်ဗျ။
ဟီး ခုနက ချာမေးပွဲ မှားဖြေလိုက်လို့ဗျို့..
c, a,dပါခင်ဗျ..ဘွာတေး
Feb 11, 2009, 9:22:00 AM
Feb 11, 2009, 12:44:00 PM
ခေါင်းနောက်နောက်နဲ့ ၀င်စားသွားတယ် cad လား
အင်္ဂလိပ်စာကို သေသေချာချာ သင်ယူချင်ပါတယ်.. တနေ့နေ့တော့ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Feb 11, 2009, 1:41:00 PM
၀ိုင်းဖြေကြတာ ပျော်စရာကြီး။ :D
မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ အဖြေမှန်က c,a,d ပါ။ နောက်ဆိုရင် ဒီထက်ခေါင်းစားတာလေးတွေ ရွေးတင်မှပဲ။ :P
Feb 11, 2009, 9:05:00 PM
ကိုစေးထူးရေ... ဒီမှာ ဆိုက်လေးတခုရှာဖွေရင်း တွေ့ထားတာလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာရှိတဲ့ ဆိုက်တွေက လေ့လာသူတွေအတွက် အတော်လေးကိုအကျိုးများစေပါတယ်..။ (သိပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ)
Feb 11, 2009, 11:20:00 PM
၂ ခုတောင် မှားတယ်တော့... ရှက်လွန်းလို့မျက်နှာမပြဝံ့တော့ပါဘူး..။
ကျောင်းသားကြီှးဆီက ကျောင်းသူလေးပြန်စာသင်သွားတယ်နော်.. ကျေးဇူးပါ
Feb 14, 2009, 10:33:00 AM
ပြီးရင် မှား မှန် သိချင်ပါတယ်.
ကျနော်လည်း မောင်ကျည့်ပွေ့ တယောက်ပါ။
Feb 14, 2009, 6:10:00 PM